Ogaden News Agency (ONA) – La socodka Diktaatoorada sinaba uma wanaagsana ( There is never a good idea to go to bed with dictators)
La socodka Diktaatoorada sinaba uma wanaagsana ( There is never a good idea to go to bed with dictators)
Posted by ONA Admin	/ July 27, 2012
Wargayska ka soo baxa dalka Norway –Aftenposten- ayuu madaxa qaybta Yurub ee Human Rights Watch Mr. Jan Egeland aad ugu cambaareeyay dawladda Norway lacagta faraha badanee ay siiso Itobiya. Madaxa HRW ee Yurub ayaa ku tilmaamay wax lala yaabo in iskaashi uu dhex maro dawlad heerka ugu sareeya ka joogta macangag-nimada (dictatorship).
24 saxafi iyo mucaarad siyaasi ayaa bishan gudaheeda xabsiga la dhigay iyagoo lagu eedeeyay qaanuunka caalamka uu ka horyimid ee Itobiya ay ku tilmaantay ka hortagga argagixisadd oo lagu kala xukumay inta u dhaxeysa 8eed sano iyo xabsi daa’in. Wuxuu sheegay Mr. Egeland in xaaladda xuquuqda aadanaha dadweynaha ay sii xumaanayso Itobiya.
Waxaa kaloo uu sheegay madaxa xafiiska Yurub ee HRW in uu jiro fikrad ay dawladaha deeqda bixiya qaarkood isku raacsan yahiin kaasoo ah inuusan qofna ogolaan karin xadgudubka baahsan ee xuquuqul insaanka ee Itobiya ka socda in aan deeqda la siinayo lagu xidhin. Itobiya waxaa ka taliya xukuumad macangag ah ayuu yidhi mareeyaha qaybta Yurub Mr. Jan Egeland.
Marar badan ayuu arintaa kala hadlay madaxda Norway oo uu la kulmay, hasa ahaatee waxay ka mid tahay Norway dawlada kale oo reer Galbeedka ah oo taageera Itobiya.
Arinta Itobiya waxay la mid tahay buu yidhi Mr. Egeland taageeradii la siin jiray xukuumadihii Carabta ee laga eryay Masar iyo Tunis iyadoo sabab looga dhigayo taageeradii la siinayay inay muhiim u yihiin xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Hasa ahatee duruusta laga faa’idaystay kacdoonadii shucuubta Carabta ayaa waxaa ka mid ah in aanay sinaba u fiicnayn in lala socdo Kaligood-Taliyayaasha (Dictators) ayuu yidhi Mr. Egeland, isagoo raaciyay way ka qoomamayn doonaan dawladaha taageeraya maalinta uu dhoco Kaligii Taliyeha Itobiya.
Inkastoo ay dawladda Sweden dhintay lacagtii ay siin jirtay dawladda Itobiya, waxaa 3ex jibaaray Norway mucaawanada ay siiso ee loogu talagalay in lagu bixiyo horumarinta beeraha. Hasa ahaatee waxay haya’do caalami ah iyo saxafiyiin banaan oo baadhitaan arintaa ku sameeyay xaqiijiyeen in Itobiya ay hab siyaasadeed u adeegsato mucaawanada loogu talagalay beeralayda oo la siiyo un kuwa taageersan xukuumadda meesha beeralayda lagu tuhmayo inay mucaaradka raacsan yihiin aan waxba la siinin.
Dawlada dhowr ah oo reer Galbeedka ah ayaa ku dooda in Itobiya horumar uu ka socdo oo dadka Itobiyaanka ah saboolnimada ka saaraya sidaa darteed aan la tixgalinin xadgudubka ay ku hayso Itobiya xuquuqda aadanaha, arintaasoo ay dod badan ka jeediyeen haya’daha ay qusayso oo ku dooday in qofka aadanaha ah iyo xuquuqdiisa aadminmo ay tahay in ahmiyada 1aad la siiyo.